Gadzira rudo kwete hondo - Afrikhepri Fondation
Rudo pasi pano
Ita rudo Kwete Hondo
Lakareba hedonistic rwizi rwemwana anotora sosi yayo mukusaziva kwake kupi bath prenatal memories of kuchengetedzeka uye rugare. Saka, izvo zviripo zvinoda kuwana uku kunakidzwa kwepascenta kunzwa. Asi nzira yekuiwana nayo?
Kuziva kuti hazvigoneke mumuviri kuti adzokere mudumbu raamai, uyo aripo achatsvaga hupenyu hwake hwese kutsiva ino nzvimbo yakachengeteka uye inofadza.
Achagara achitsvaga kuzadza kushaikwa uku nenzira dzese dzinokwanisika, achishandisa shanu pfungwa kuti awane mufaro: Kunakidzwa kwekuzadzwa neruva rakanaka, kunakirwa kwekuzadzwa nemumhanzi, kunakirwa kwekuzadzwa nepefiyumu yakanaka, iyo kunakirwa kwekuzadzwa nekubata kweumwe munhu, kunakirwa kwekuzadzwa nerudo rwemumwe munhu.
Asi, chiito chepabonde chinosanganisira mufaro wekupedzisira nekuti, iIcho chinomiririra chishuwo chedu chakasimba chekubatanidza zvakare chakakosha kubatana uye kuita kudzoka kune iro rekutanga zai.
Murume nenzira yekufananidzira anoburitsa kudzoka kwemukati kwepabonde muchiitiko chebonde icho chinoita kudzoka kwetsime rehupenyu: Iyo yekutanga mvura. Nekudaro, anorarama munguva pfupi, iwo mufaro wakazara wemucheche anogezwa muamniotic fluid.
Kupukunyuka kubva mukushushikana kwake kuripo, izvo zviripo zvinosanganiswa nemumwe wake kuvaka zvakare zygotic fusion. Uye zvakare, kuburitswa kwema libidinal impulses mu coitus kunogadzira kuburitsa iyo inosunungura munhu kubva kune yake isiri-inomiririrwa pathogenic yemukati makakatanwa.
Hondo ndiyo muenzaniso weusingaiti masimba ezvinyorwa zvake zvepidinal kubva ipapo munhu akasangana nesimba risina kugadziriswa anochinjisa kune mumwe munhu.
Musango ravo reEquator, ma bonobos asingadzoreki uye asingagutsike anoita seane chirevo chavo "ita rudo, kwete hondo". Saka, pejiKuti vagadzirise kusawirirana uye kudzivirira vanhurume kubva pakurwisana, vakadzi vanopindira voita "mazano" kwavari avanotadza kuramba. Ava vanoita zvepabonde maminetsi makumi mapfumbamwe nepfumbamwe paavhareji. Iyo bonobo saka inotsiva bonde kune mhirizhonga. Kusiyana neyechimpanzi iyo kuita kwake bonde kunoenderana kwazvo nekubereka, iyo bonobo inoshandisa kudzokorora kurara pabonde kudzikisira hukasha hwayo nekusimbisa hukama hwemagariro pamwe nekubatana kweboka.
Pakupedzisira, maitiro ehupenyu hwe bonobos ane rugare rwakawanda kudarika rwevamwe chimpanze, avo vanokakavara muhutano uye avo, pamwe, vakaronga kuparadza kwechokwadi kunopesana nemapoka evakidzani.
Panzvimbo pekudzvinyirira kana kushora zvebonde, zvingave zvirinani kuti unzwisise kuti inzira inoshanda yekudzora mhirizhonga munharaunda: "Saka ita rudo, kwete hondo".
Shanduro shoma ye eco-logic kuitira kushandiswa kwakatsvuka, kwakadzikama, misoro yakakomba
Maitiro ekuita shamwari uye kufurira vamwe - Dale Carnegie (Audio)
Chidzidzo chebaba vanovamba
Maca, iyo yakasikwa yeInas
Zvokudya zvakapfuma mumatato zvinogona kuderedza dambudziko rekenza yeprostate